एकाएका बेपत्ता भए कांग्रेस नेता शशांक कोइराला, के छ पछिल्लो अवस्था ? - jagritikhabar.com
एकाएका बेपत्ता भए कांग्रेस नेता शशांक कोइराला, के छ पछिल्लो अवस्था ?
पार्टी सभापतिमा शेखर कोइरालालाई समर्थन गर्ने वचन दिएका कांग्रेस महामन्त्री डा। शशांक कोइराला बुधवार एकाएक संखुवासभा पुगेका छन्।
नेताद्वयबीच मंगलवार १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा शेखरलाई समर्थन गर्ने सहमति भएको थियो। मंगलवार भएको सहमति आज एक कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहँदा महामन्त्री कोइराला भने एकाएक बेपत्ता भएका छन्।
पार्टीको कुनै कार्यक्रम नरहे पनि महामन्त्री कोइराला जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको संखुवासभा पुगेका हुन्। शेखरको निवास बसुन्धारामा मंगलवार साँझ शशांकसहितको डिनर मिटिङ भएको थियो ।
मंगलवारको छलफलमा शशांकले सभापतिमा शेखरलाई सहयोग गर्ने सहमति जनाएका थिए। सोमवार सर्लाहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि शशांकले शेखरले आफूलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने बताएका थिए।
शेखर र शशांकबिच मंगलवार भएको सहमतिमा सुजाता कोइरालाको पनि समर्थन रहेको थियो ।मंगलवार शेखर र शशांकबीच भएको सहमति अनुसार बुधवार आज बिहान शशांकको निवास महाराजगञ्जमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ,
सभापतिमा शेखरको उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तय भएको थियो। बिहान ११ बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने र त्यसका लागि १०ः३० बजे शशांकको निवासमा तीन नेता भेट्ने सहमति भएको थियो।
तर, बिहान साढे ८ बजे शशांकले फोन गरेर पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भेट्न बोलाएको जानकारी गराउँदै पत्रकार सम्मेलन अर्को हप्ता गरौंला भनेको स्रोतको दाबी छ।
‘मंगलवार भएको सहमतिअनुसार आज बुधवार कोइराला परिवारको तर्फबाट सभापतिमा शेखरको उम्मेदवारी घोषणा गर्ने सहमति भएको थियो, अन्तिम समयमा आएर भाँडियो,’ कांग्रेसमा संस्थापनइतर समूहका एक नेताले लोकान्तरसँग भने।
शशांकलाई संखुवासभा लैजाने काम कांग्रेसका जिल्ला सभापति दीपक खड्का र शशांकका पीए भरत तिवारीले व्यवस्थापन गरेको कांग्रेस स्रोतले बतायो।
शुक्रवारसम्म शशांक संखुवासभामै रहने भन्दै जिल्ला सभापति खड्काले फेसबूकमा सन्देश लेखेका छन्। महामन्त्री कोइरालामा आएको नाटकीय परिवर्तनलाई कांग्रेसभित्र अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
‘संस्थापन इतरबाट साझा उम्मेदवार तय गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको समयमा कोइराला परिवारका सदस्यबाट एक जनामा सहमति हुने कुराले उत्साही बनाएको थियो,
तर महामन्त्री किन बिच्किनुभयो गम्भीर विषय छ,’ कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने। सुजाता कोइरालालगायत केन्द्रीय सदस्यहरूले शशांकलाई फेरि पनि मनाउन कोशिश गर्ने भएका छन् ।
‘कुनै कार्यक्रमविना अचानक उहाँ किन काठमाडौंबाहिर जानुभयो, त्यसले हामीलाई अचम्मित तुल्याएको छ। प्रकारान्तरले यसले महामन्त्रीलाई नै घाटा पुग्छ,’ ती केन्द्रीय सदस्यले भने।
तेस्तै, सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले ७ बुँदे सहमति गरेको छ। आसन्न राष्ट्रियसभा र प्रदेश तथा संघको उपनिर्वाचनमा मिलेर चुनाव लड्ने गरी ७ बुँदे सहमति भएको हो।
गठबन्धनको भविष्यलाई लिएर चौतर्फी प्रश्न उठिरहेका बेला आज बसेको गठबन्धन बैठकले सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने निर्णय गरेको हो। गठबन्धनका तर्फबाट आज साँझ जारी गरिएको विज्ञप्तिमा पाँच दलीय गठबन्धन निर्माणसँगै मुलुकको राजनीति लिकमा फर्किएको दाबीसमेत गरिएको छ।
त्यस्तै, भताभुङ्ग पारिएको राज्य संयन्त्र र भत्क्याइएको राज्य पद्धतिलाई लिकमा ल्याउने महत्वपूर्ण प्रयास भएको बताइएको छ । गठबन्धनका कारण लोकतन्त्र र संविधान सुरक्षित भएको उनीहरुको जिकिर छ।
विज्ञप्तिमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्रको सम्वद्र्धन, संविधानको रक्षा र सुशासनको प्रवद्र्धनलाई मूलमन्त्र बनाएर गठबन्धन क्रियाशील रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप अभियानलाई युद्धस्तरमा अघि बढाइएको र कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रले गति लिन थालेको दाबी गठबन्धनले गरेको छ।
स्थीर सरकारको निर्माण र राजनीतिक स्थिरतासँगै स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता एवम् उद्यमीहरु उत्साहित भएको पाँच दलीय गठबन्धनको दाबी छ । जनतालाई छिटो र सहजरुपमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराई,
जनताको विकास र सम्मृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।गठबन्धनले बाढी पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा उनीहरुको पुनस्र्थापनाका लागि प्रभावकारी रुपमा काम अघि बढाइएको पनि उल्लेख गरेको छ।
जारी विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री त्तहा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राई,
र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।यसअघि आजै बसेको ५ दलीय गठबन्धन समन्वय समितिको बैठकले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादमा यथाशीघ्र निकास हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो।
संयोजक रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेमा आशा समेत गरेको छ ।यो सहमतिले एमालेलाई झट्का लागेको छ। इमान्दार मेडिया बाट